प्रचण्डलाई राजनीति गर्न सूर्य थापाले दिए टिप्स - हाम्रो देश
प्रचण्डलाई राजनीति गर्न सूर्य थापाले दिए टिप्स
काठमाडौँ – नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजनीति गर्न सुझाव दिएका छन्।
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई शून्यमा झार्ने आदेश उपर दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा नदिएपछि थापाले दाहाललाई राजनीति गर्न सुझाएका हुन्।
थापाले निस्सा नदिने बिहीबार आएको सर्वोच्चको आदेशलाई समर्थन गर्दै आफैँले भाड्न खोजेको एकतालाई झगडियाका रुपमा कायम गर्न खोजेको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका हुन्।
थापाले सामाजिक सञ्जालामा लेखेका छन्, ‘लड्डु खाएर उल्लास मनाउने परम्परा त छैन नै। तैपनि पुनरावलोकनको रोइलो अब सकिएको छ। निवेदक महोदयप्रति सहानुभूति चाहिँ छ, सम्हालिनुहोस र राजनीति गर्नुहोस्। राजनीतिज्ञ झगडिया हुन खोज्दा यस्तै हुँदो रहेछ। आफैले भाँड्न चाहेको एकता कति प्यारो?’
थापाले सामाजिक सञ्जालमा उक्त भनाइसँगै राखेको प्रचण्डको भावविहोल फोटो छोरा प्रकाश दाहालको निधन हुँदाको हो। २०७४ मंसिरमा निधन भएका प्रकाश शवलाई श्रद्धाञ्जली दिन पार्टी कार्यालयमा आयोजित शोक सभा हुँदा सञ्चार माध्यमले उक्त फोटो खिचेका थिए।
सर्वाेच्च अदालतकाे फैसला ।
लड्डु खाएर उल्लास मनाउने परम्परा त छैन नै। तैपनि पुनरावलोकनको राेइलाे अब सकिएकाे छ !
निवेदक महाेदयप्रति सहानुभूतिचाहिं छ- सम्हालिनुहाेस र राजनीति गर्नुहाेस ! राजनीतिज्ञ झगडिया हुन खाेज्दा यस्तै हुँदाेरहेछ !
आफैले भाँड्न चाहेकाे एकता कति प्याराे ? pic.twitter.com/gyn50E2Aik
— Surya Thapa (@ThapajiSurya) April 1, 2021